ဖုန်း . တက်ဘလက် နဲ့ ကွန်ပျူတာ အမြဲလိုလို ကြည့်နေတဲ့သူတွေ သတိထားရမယ့် မျက်လုံးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဖုန်း . တက်ဘလက် နဲ့ ကွန်ပျူတာ အမြဲလိုလို ကြည့်နေတဲ့သူတွေ သတိထားရမယ့် မျက်လုံးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှု
Author: lubo601 | 12:38 AM | No မှတ်ချက် |
Mg Zin Myo - သုတစွယ်စုံ
အသက် ၄၀ အရွယ် လူတစ်ယောက်က သူ့မျက်လုံးမှာ အရောင်တွေ သန်းနေလို့ ပြရင်းနဲ့
diagnosed eyes cancer ဖြစ်နေတယ် လို့ သိရပါတယ် .
သိပ္ပံပညာရှင် တွေ အများစုက အမြဲလိုလို သုတေသန ပြုနေတဲ့ ကိစ္စထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့
Mobile ဖုန်းများထဲမှ ဖြာထွက်နေတဲ့ အစိမ်းရောင် အလင်းတန်းတွေဟာ လူရဲ့ အမြင် အာရုံကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ပြောပါတယ် .
ကျန်တော်တို့ ညဘက် ဖုန်းကို ညမီး အလင်းလေးနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိန်အကြာကြီး အသုံးပြုတဲ့အခါ ဖုန်းရဲ့ အလင်းတန်းဟာ မျက်စိကို တိုက်ရိုက် ရောက်ရှိပြီး အဒီက ဖြစ်လာတဲ့
electro beam ဖြာထွက်မှုကနေ မျက်လုံးအိမ်ကို ခြောက်သွေ့စေပြီး မျက်လုံးကင်ဆာမှသည် မျက်စိ ကန်းသည်အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ် .
ဒီ အမည်မဖော်ပြထားတဲ့ သူဟာ ညတိုင်း အမှောင်ထဲမှာ ဖုန်းကို အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ လောက် သုံးလေ့ရှိပြီး အခုတော့ သူ ကောင်းကောင်း မမြင်ရတော့ဘူး လို့ ပြောပါတယ်.
ဆရာဝန်တွေကလည်း အဒီ မျက်လုံးအိမ် ခြောက်သွေ့မှုကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ retina replace လုပ်တာက လက်ရှိ ဆေးလောကမှာ အရမ်းကို အခက်အခဲ ဖြစ်ပြီး ကုသရ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေတမျိုး
လို့လည်း ပြောပါတယ် .
ယခု ဟောင်ကောင် နဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ
လူငယ်အများစုဟာ မျက်လုံးအိမ်ခြောက်သွေ့ခြင်း .မျက်လုံးကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်း စတဲ့ ရောဂါတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ ပြောပါတယ် .
အဓိက အချက်ကတော့ smart phone တွေကို အသုံးများခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ပါပဲ .
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ လက်ကိုင်ဖုန်း .တက်ဘလက်နဲ့ ကွန်ပျုတာ သုံးစွဲမှုမျိုးကို အချိန်များစွာ မသုံးစွဲဘို့ . ညအချိန် အလင်းရောင် မရှိတဲ့အချိန်မှာ မိုဘိုင်းဖုန်း .တက်ဘလက် နဲ့ ကွန်ပျူတာ တွေရဲ့ အလင်းရောင် တခုထဲနဲ့ လုံးဝ မသုံးစွဲပဲ မီးအလင်းရောင် အလုံအလောက် ရတဲ့နေရာ အောက်မှာသာ သုံးစွဲကြဖို့ အကြံပေးထားပါတယ် .
မျက်လုံးကင်ဆာ. မျက်လုံးအိမ်ခြောက်သွေ့မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရောဂါတွေ ကင်းဝေးနိုင်ဖို့ အင်တာနက်သုံးချိန် .ဖွဘုတ်ပွတ်ခ်ျိန်.COC ဆော့ချိန်တွေကို တတ်နိုင်သမျ လျော့ချ ကြဖို့နဲ့ ဖုန်းဘက်ထရီ ကုန်မှ အိပ်တဲ့အကျင့်ကို ပြင်ြကဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ
အဆင်ပြေအောင် ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားလို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါခင်ဗျ .
Ref: MP4 YOU
BY MAR MAR · 28/01/2016